Webinar Alert: Ntughari site na ịkọ akụkọ | Martech Zone
Chọpụta, anyị anụrịrị ya na mbụ. Anyị kwesịrị ịkọ akụkọ ndị dị mkpa ma nwee isi iji dọrọ atụmanya ma na-eme mgbanwe. Mana, ọ bụrụ na anyị anụtụla ya mbụ, mgbe ahụ ọ bụ ihe doro anya na ọ na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, echiche nke ịkọ akụkọ abụwo isiokwu "dị nro" kama ịbụ ihe nwere ike ịghọ sayensị. Kechioma maka anyị niile, anyị maara na ndị mmadụ maara etu esi ahazi usoro maka ịkọ akụkọ.
Kantalup, a ụlọ ọrụ na-emepụta vidiyo nke pụrụ iche na akụkọ, Na-arụkọ ọrụ na anyị ka anyị mee webinar na Tuesday a, Mee 6, na 2 pm EST / 11 am PST na Storytelling na Marketing Content: Otu Akụkọ Si Eme Mgbanwe. Na webinar a, ha ga-ekerịta ụfọdụ ozi dị mkpa banyere ịkọ akụkọ, gụnyere:
Etu esi etinye akụkọ na ọdịnaya gị niile
Ndụmọdụ otu esi etinye akụkọ na vidiyo gị
Etu esi ewu usoro ịre ahia ahia anya
Otu esi eji ihe atụ nke ịkọ akụkọ dị irè iji wuo akara gị
Ayszọ iji mee ka akụkọ gị nụ
Mana, nke kachasị, ha ga-ekekọrịta ya usoro ha ji akuko akuko, tinyere usoro ọmụmụ banyere etu esi arụ ọrụ maka ndị ahịa ha, gụnyere Kroger na Whole Foods.
Sonye anyi na mkparita uka a anyi na Jon DiGregory si na Cantaloupe TV na nke anyi Douglas Karr nke Martech Zone. Anyị na-ele anya ịhụ gị ebe ahụ!
Nweta otu Akụkọ Si Eme Mkpokọta Webinar